Machadka Luuqadaha iyo dhaqanka ee Jaamacadda Capital oo loogu magac-darey Dr. “Kaddare” – Radio Muqdisho
Machadka Luuqadaha iyo dhaqanka ee Jaamacadda Capital oo loogu magac-darey Dr. “Kaddare”
Waxaa magaalada London lagu qabtey xaflad si heer sare ah ay u soo diyaariyeen aqoon yahanno Soomaaliyeed laguna sii sagootinayey Dr Cabdulqaadir Wehliye Afrax oo ah gudoomiyaha Jaamacadda Capital ee magaalada Moqdisho.
Dr. Cabdulqaadir ayaa warbixin dheer ka siiyey aqoonyahanadi kulanka ka soo qeyb galey xaaladda waxbarasho ee jaamacadda Capital, isagoo xusay in hadafka Jaamacadda loo furey ay tahey in la soo saaro aqoon yahanno tayo leh.
Waxa uu si qoto dheer uga waramay xiriirka wanaagsan ee uu la sameeyay Jaamacado, Collejooyin iyo Macaahiid kale sida Nursinka, Caafimaadka iyo Kuliyadda Technologiyadda ama Computer Engineering.
Dr. Wehliye oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in Hey’adahan wax barasho ay ballan qaadeen iney jaamacadda Capital ka caawin doonaan qalabeynta, Curiculumka iyo in ardeydu ay helaan shahadooyin Caalami ah.
Dhanka kale Dr. Wehliye ayaa munaasabadda uga dhawaaqey in Machadka Luuqadaha iyo dhaqanka ee Jaamacad Capital loogu magac darey Alaha u naxariistee, Dr. Xuseen Sheekh Ahmad “Kaddare” oo ka mid ahaa aas’aasayaashi qoraalka afka Soomaliga oo bishan horraanteedi ku geeriyoodey magalaada Muqdisho.
Aqoon yahannadi ka qeyb galey xafladan ayaa aad u soo dhaweeyay hadalka Dr. Wehliye kuna tilmaamey arrin taariiqi ah in Dr. “Kaddare” loogu magac daro machadka Luuqada iyo dhaqanka ee Jaamacad Capital oo sanadka soo socdo isku badali doonta kuliyadda luuqadah iyo Dhaqnanka ee Dr.”Kaddare”.
Gudoomiye Ku Xigeenka 2aad Ee Baarlamaanka Oo Kigali Siminaar Uga Furay Guddiga Garsoorka Ee Baarlamaanka “SAWIRRO”
Juventus oo Sii Kordhisay Dhibcaha ay Ku Hogaamineyso Horyaalka Talyaaniga “SAWIRRO”